Kuzofinywa ngendololwane kushada uMlamuli Nxele | News24
Kuzofinywa ngendololwane kushada uMlamuli Nxele
ISITHOMBE:sya meyiwa uMlamuli Nxele ozobopha ifindo likasofasilahlane no Lungelo Dladla ngalempelasonto.
KUZOFINYWA ngendololwane endaweni yakwaMafunze ngale mpelasonto njengoba kuzobe kugcagcelwa loyo owayephethe ezokukhangisa emsakazweni Ukhozi FM uMlamuli Nxele nesinqandamathe sakhe uLungelo Dladla.
Lo mshado okulindeleke ukuthi uhanjelwe izinkumbi ezihlukene zabantu okubalwa kubona ubuholi besifundazwe uzothatha izinsuku ezintathu, okuzoqala ngomshado wesilungu, udwendwe, umshado wesintu nomabo.
UNxele ophethe ezezikhangiso e-Airports Company of South Africa (ACSA) uzobopha ifindo likasofasilahlane ngokwesilungu noDladla wodumo lomdlalo kamabonakude “UGugu no Andile” kusasa (Friday) eThe Zunguness eHowick. Lo mcimbi kulindeleleke ukuba uhanjwelwe abangani abaseduze nezihlobo.
Okhulumela umndeni uMnu Zazi Nxele uthe yonke into imi ngomumo njengoba kuzothi kuqedwa ngomshado wesilungu, umakoti alethe udwendwe ngoMgqibelo.
“Umakoti uzoletha udwendwe ngoMgqibelo bese kwenziwa indlakuse lapho kuzosinwa ubusuku bonke. Ngesonto ekuseni uzohamba ayogeza emfuleni bese eyangeniswa ngokusemthethweni ekhaya.
“Ngalo lolo suku kuyobe sebegcagca ngokwesintu okuzoba khona nephoyisa le nkosi, bese kuphetha ngomabo.”
Uqhube wathi kuzokwenzeka okungajwayelekile njengoba uNxele ezophinda angenise kubo amakhosi aqhamuka ezigodini ezihlukene eMgungundlovu namaphethelo.
“Umfowethu ubambe iqhaza elikhulu esebenzisana namakhosi ahlukene, ngakho ukuba khona kwawo kuzobe kukhombisa ukuhlonipha kwakhe iqhaza lawo alibambile emphakathini.”
Ngaphandle kobuholi besifundazwe nabesemkhakheni wezikaqedisizungu, kulindeleke namaqembu ahlukene omculo wesintu, njengoba kuzoba khona neqembu labaTswana elizobe linandisa.
“Umndeni ujabule kakhulu ngokwamukela umakoti, futhi asingabazi ukuthi uzozizwa amukelekile. Ungena emndenini obumbene nozigqajayo ngamasiko esintu,” kusho uNxele